Yesu naw appar pream ko – wonderful lyrics ::
Yesu naw appar pream ko
1. येशु नाउँ अपार प्रेमको सबैभन्दा श्रेष्ठ हो यो
जसमा सबका धुंड़ाले टेक्नुपर्छ अवश्य ।
2. येशु नाउँ अमोल प्रेमको पापी जनको लागि हो
यसमा लिइयो करहार जसले गर्दछ उद्दार ।
3. येशु नाउँ यो दया हो जो बालकलाई दिइयो
जसले भोगे महा दख: हामी सबलाई दिनु सुख ।
4. येशु नाउँ जो दिइयो मनि सारा स्वर्गको
पापी यसमा पत्याउँदा बचाइन्छ नै सदा ।
5. येशु नाउँ अपार प्रेमको ईश्वर मानिस नाउँको भो
यसमा आशा गर्ने नीच आउँदैछौ तपाई नजीक।।
1. yesu naw appar pream ko sabai bhanda srestra ho yo
jsama sabka ghuda le teknu parcha awashya
2. yesu naw amol preamko papi jan ko lagi ho
yesma leyo karhar jasley garda cha uddhar
3. yesu naw yo daya ho jo balak lai deyo
jas ley bhogey maha dukha hame sablai dinu sukha
4. yesu naw jo deyo mane sara swarga ko
papi yesma patyauda bachyencha nai sadha
5. yesu naw appar pream ko iswar manish naw ko bho
yesma aasha gerney nich audai chaw tapai najik
visit also stuti hos prabhu ko aadharta prasansha